यी ९ कुरामा सधै गोपनियता अपनाउनु उचित हुन्छ !! | सुदुरपश्चिम खबर
यी ९ कुरामा सधै गोपनियता अपनाउनु उचित हुन्छ !!
धनसम्पत्ति एवं पैसाले जीवनमा सुखसमृद्धि हासिल हुन्छ तर यही पैसा कतिपय अवस्थामा दुःखको कारणसमेत बन्नपुग्छ । आप्mनो सम्पत्तिको विषयमा जानकारी जति कम मानिसलाई हुन्छ उति नै राम्रो मानिन्छ । अन्यथा कतिपय गलत मनसायका मानिसले पैसा छ भन्ने सुइँको पाएर पहिले अनेक तिकडम गरेर मित्रता गाँसी पछि ठूलो नोक्सानसमेत पु¥याउन सक्छन् । तसर्थ आप्mनो सम्पत्तिका विषयमा अरुलाई जानकारी दिनुहुँदैन ।
मैथुन वा यौनजीवनका विषयमा अरुलाई जानकारी दिनुहुँदैन । यौन जीवनलाई गोप्य राख्नु नै हरेक हिसाबले राम्रो मानिन्छ । दुई व्यक्तिबीचको कुरा तेस्रोले थाहा पायो भने उसले त्यसबाट नाजायज फाइदा उठाउन सक्छ । यो विषयमा अरुले थाहा पाए भने त्यो आप्mना लागि समस्या वा लाजको विषय बन्नपुग्छ ।
को हुन् शुक्रचार्य ?
शुक्राचार्य भृगु ऋषिका पुत्र हुन् । उनले अंगिरस नामक ऋषिलाई गुरु बनाएका थिए तर अंगिरस शुक्राचार्यलाई भन्दा आफ्नो छोरालाई बढी ध्यान दिन्थे, विद्या प्रदान गर्ने क्रममा भेदभाव गर्थे । त्यसकारण शुक्रचार्य अंगिरसलाई छाडेर भगवान् शिवकहाँ शिक्षा लिन गए । शिवले पनि उनलाई शास्त्र एवं शस्त्रसम्बन्धी दुवै विद्या प्रदान गरे । समुद्र मन्थनपश्चात् जब देवताहरुले छलपूर्वक सबै अमृत दैत्यहरुलाई नदिई आफूहरुले मात्र पान गरे तब भगवान् शिवले शुक्राचार्यलाई मृतसञ्जीवनी विद्या प्रदान गरे । यस विद्याको प्रयोग गरेर मरेका प्राणीहरुलाई जीवित तुल्याउन सकिन्थ्यो ।
शुक्रनीतिको एक श्लोकमा ९ वटा यस्ता कुाहरु बताइएका छन् जसलाई हरेक अवस्थामा अथवा हर हालमा लुकाएर राख्नुपर्छ । व्यक्तिगत रहस्यसँग जोडिएका यी नौवटा कुरा अरुले थाहा पाएका खण्डमा त्यो उसका लागि हानिकारक हुन्छ । यी रहस्य जोगाएर राख्न सके व्यक्तिको गोप्यता कायम रहन्छ र उसको विषयमा अरु कसैले थाहा पाउन सक्दैन । अनलाइनखबर बाट सभार